नेप्से अपडेट : सेयर बजार झिनो अंकले बढ्यो, अधिकांश उपसमूह घट्यो, अरूण भ्याली हाइड्राेपावर लगानीकर्ताको रोझाइमा - Arthasansar
बुधबार, १६ भदौ २०७८, १५ : ०१ मा प्रकाशित
लगातार घट्दै गइरहेकाे सेयर बजारमा आज (बुधबार) १.१४ अंकले बढेको छ । दिनभर घट्दै बढ्दै गरीरहेकाे सेयर बजार अन्त्यमा बढेर नै बन्द भएकाे हाे । निरन्तरकाे करेक्सनले प्यानिक बनेका लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा हरियाली देखिँदा उत्साहित छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताकाे पहिलाे काराेबार दिन आज (बुधबार) सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १.१४ अंकले बढेर २९७६.९८ विन्दुमा पुगेकाे छ । नेप्से ०.०४ प्रतिशतले बढेकाे हो । यस्तै, सेन्सेटिभ परिसूचक ०.१७ अंकले बढेर ५५०.६९ विन्दुमा पुगेकाे छ ।
कूल २२६ वटा कम्पनीकाे एक कराेड ७१ लाख ८२ हजार ८ सय ७१ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ९ अर्ब ३५ करोड १७ लाख ९९ हजार ६ सय ५५ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएकाे नेप्सेले जनाएकाे छ ।
स्टकका अनुसार काराेबार भएका १३ उपसमूहमध्ये ४ वटा उपसमूहकाे सेयर बढेकाे छ भने बाँकी ९ वटा उपसमूहकाे सेयर घटेकाे छ ।
बुधबार पनि अरूण भ्याली हाइड्राेपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडकाे नै सर्वाधिक काराेबार भएकाे छ । कम्पनीकाे ५९ कराेड ९९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बराबरकाे काराेबार भएकाे हाे ।
बुधबार रूरू जलविद्युत परियाेजना कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन् । कम्पनीकाे सेयरमूल्य ७.५५ प्रतिशतले बढेर एक हजार ४ सय ४८ रूपैयाँ पुगेकाे छ ।
यता सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन् ।
बजारमा त्रास आएकै हो ? अब कसरी लगानी गर्ने ? Forecast for Bhadra 13-17 2078